I-Carabiners ziNcedo eziPhambili zokuHlola
I-carabiners iyisicebo esisisiseko esibalulekileyo osisebenzisayo xa uhamba ngokunyuka kweqhwa. I-carabiner, ihashe lomsebenzi we- rack 's rack of gear , yinto nje enamandla ene-snap-link eyenziwe yeluminium aluminium engaqhelekanga okanye isinyithi esinyithi esisetyenziselwa ukudibanisa zonke iinkalo ezahlukeneyo zokukhupha inkqubo yokukhuphuka ndawonye.
Ii-carabiners, ezibizwa ngokuthi "amaqabunga" kunye ne "biners," zinezicwangciso zentwasahlobo evuleka phantsi komngcipheko wesunwe, okwenze kube lula ukuyiqhafaza ukunyuka iigesi njengetambo.
Intwasahlobo ngaphakathi kwe-carabiner igcina isango livaliwe. Isango livuleka ngokuvuleka ngeminwe ukuvumela intambo okanye esinye isisithi ukuba sihlulwe kuyo kwaye siyivale xa sikhululwa. I-Carabiners iqine kakhulu xa isango livaliwe kwaye libuthathaka xa isango livulekile. Abaqhubi bavame ukusebenzisa i-carabiners yokuvala, okanye i-carabiners ngesango elivaliweyo xa lifuna ukuqiniseka ukuba akukho nto ivela ngaphandle kwe-carabiner.
Sebenzisa ii-Carabiners zokukhusela
I-Carabiners yenza imisebenzi eyahlukahlukeneyo yokunyuka, kuquka ukufaka intambo yokukhwela kwintambo, ukuhlanganisa intambo yokunyuka kwihrikhi okanye ingxube yegesi njengekham (SLCDs) okanye intambo yokukhuphuka , ukufaka i-climber kwi- ankle ye-belay , kunye nokudibanisa ukunyuka ukuya kwintambo yokuxela . Iibharabha ziqine kakhulu kuba ukhuseleko lwethu lokunyuka luxhomekeke kubo.
I-Carabiners Iza Kwizinto ezininzi zobunzima kunye nobukhulu
Ii-carabiners ziza kwiimeko ezahlukeneyo kunye nobukhulu kunye nezinto ozithengayo kunye nokuzisebenzisa kuxhomekeke kwindlela kunye nokunyuka kwakho.
Naliphi na i-carabiner eyenziwe ngumenzi wegama lomkhangeli njengoPetzl, Black Diamond, Metolius, kunye ne-Omega Pacific, ukhuselekile, iqinile, kwaye iza kuhlala ixesha elide ukuba lisetyenziswe kakuhle.
Sebenzisa kuphela i-UIAA-I-Carabiners evunyelweyo
Iibharabha, kunye nezinye izixhobo ezinjenge- harnesses , intambo, kunye neekhamera, zakhiwa ukuhlangabezana nemigangatho emiselweyo eyenziwe ngu-UIAA (International Mountaineering and Climbing Federation).
Zisoloko uthenge izixhobo ezivunyiwe yi-UIAA kuba uyazi ukuba ziqinisekisiwe kwaye zikhuselekile. Iirabharenti zilinganiswa ngamandla ngama-kilonewtons, umlinganiselo wemikhosi enamandla esetyenziswa kwisixhobo ngokuwa kwe-climbing.
3 I-Basic Carabiner Types
Ii-carabiners ziza ezibunjwa ezintathu ezisisiseko - i-oval, i-D enemilo, kunye ne-D engqalileyo-kwaye inezinto ezintathu ezisisiseko zamasango-isango eliqhelekileyo, isango eliqingqiweyo kunye nesango lecingo. Kukho iintlobo ezimbini zokuvala izigulane -auto-zikhiye i-carabiners kunye ne-screw-lock-carabiners.
I-Srixon Z 355 Iiklabhu zeGolf: Umqhubi, ii-Fairways kunye namaHlbri, ama-Plus Irons
Iingcinga Zesiphofu seGalofu: Ezilungileyo, Ezimbi Nezimbi
Ziziphi iinqwelo eziza kuKhonga iiNqwelomoya ukuba ndibeke?
I-Olympic Weightlifting - Indlela yakho eya kwiQela leOlimpiki
Indlela yokuvula i-Skis
I-Funniest Memes Inkcenkcazo yeNkcazo
Ngubani owasungula iMicroscope yeTanninging Scanning?
Ziziphi iCasinos ezinikela ngeeNdlela ezilungileyo?
Ulwalamano olutsha lwe-South Wales Online
I-Biography emfutshane kaGuy de Maupassant
Ukuguqula Amakhilogremu Ngama inch square okanye i-PSI ukuya kwii-Millibars
UMvelisi - Ukuphuhlisa
Ukusetyenziswa kweStoddart kunye neConolly eBukhara
Uludwe lwe-SDN (uLuhlu lwaBameli beSizwe olukhethekileyo)
I-Warren Wilson College Admissions
Ukunceda Abafundi bathathe amanqaku
Alice kwiWonderland (2010) - Iifoto kunye nabalingiswa